Global Voices teny Malagasy » Akon’ny tontolon’ny bilaogy Toniziana – Aog 2005 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Novambra 2018 8:10 GMT 1	 · Mpanoratra Mohamed Marwen Meddah Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Manoratra momba ny fanakona-masoandro (eclipse solaire) hitranga ao Tonizia amin'ny 3 Oktobra  2005 i Adib, izay saiky ho fanakona-masoandro tanteraka 98%. Tsara jerena indrindra avy eny an-tanàna atsimon'i Douz, vavahady ho an'ny Sahara Toniziana izany. Misy ny fetibe fanakona-masoandro  ho atao any an-tanàna oasis atsimo any Tamerza.
Houssein manoratra ny tsy fahombiazan'ny Firenena Mikambana amin'ny mahaolombelona , ​​ary tsy tokony hanantena zavatra be avy amin'ny tantaran'ny fanavaozana manontolo avy amin'ny Firenena Mikambana isika.
Notontosaina tao amin'ny café Montmartre tao Menzah 6 andro lasa izay ny fivorian'ny bilaogera vitsy toniziana mba hanao veloma sy hirary soa an'i Zizou izay handeha any Libanona hianatra any amin'ny AUB. Nibilaogy momba ny fiainana ao Beirota, ny oniversite, ny fitadiavana trano sy ny sisa  izy.
Nawarat manoratra momba ny andian-tsarimihetsika mampihomehy vaovao,  “Choufli Hal” (Itadiavo vahaolana aho) , izay momba ny fiainana andavanandron'ny mpitsabo saina iray sy mpisikidy iray miara-mipetraka, izay ho alefan'ny fahitalavitra Toniziana amin'ity Ramadany ity. Be mpijery be ny fahitalavitra Toniziana amin'ny Ramadan noho ireo andian-tantara Toniziana tena tsara izay vononon'izy ireo mandritra ny volana.
Kartago indray nahita sary karatra paositra an'i Tonizia . Tena manintona izy ireo.
K-pax manoratra ny tsy fahavitany tsy mihinana Ftira toniziana fahiny matsiro  (Mofo , karazana toy ny menakely tsy misy lavaka), rakotra siramamy na miaraka amin'ny aviavy vitsivitsy.
Hatem manoratra ny lisitr'ireo toerana masina Miozolomana ao amin'ny Wikipedia izay feno vaovao diso  sy tanàna sy fasana maro, ary nanindry fa ny toerana masina tokana amin'ny finoana Silamo dia Lameka, Medina ary Jerosalema.
Zied manontany tena raha fanavakavaham-bolokoditra ireo fanehoan-kevitra sasantsasany ampiasain'ny tanora Toniziana any amin'ny fivarotana kafe , na dia tsy lazaina amin'ny fomba sy feo manavakavaka aza izy ireo.
Moufattich Kaaboura niezaka nandoko sary Arabo sasany amin'ny fampiasana lokorano  saingy tsy afa-po tamin'ny vokatra, nefa koa mihevitra fa mahaliana izany ary hiezaka hanatsara izany izy.
La Blogeuse mitondra antsika ny valin'ny fifaninanana Top Model Tunisie 2005 .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/17/130477/
 fanakona-masoandro (eclipse solaire) hitranga ao Tonizia amin'ny 3 Oktobra: http://adibs1.hautetfort.com/archive/2005/09/10/eclipse-totale-le-3-octobre.html
 fetibe fanakona-masoandro: http://www.solareclipse05.org/
 ny tsy fahombiazan'ny Firenena Mikambana amin'ny mahaolombelona: http://www.rundom.com/houssein/index.php?itemid=813
 hanao veloma sy hirary soa an'i Zizou : http://www.subzeroblue.com/archives/2005/09/bye_good_luck_zizou.html
 momba ny fiainana ao Beirota, ny oniversite, ny fitadiavana trano sy ny sisa: http://zizoufromdjerba.blogspot.com
 fanokafana indray ny fivarotana Monoprix ao amin'ny faritra Lafayettte : http://www.rundom.com/karim2k/archives/002640.html
 andian-tsarimihetsika mampihomehy vaovao, : http://nawarat.blogspirit.com/archive/2005/09/13/sitcom-pour-ramadan.html
 nanangana ny tranokalany vaovao miaraka amin'ny mety hisian'ny fanomezana tapakila an-tserasera : http://chouchitou.blogspirit.com/archive/2005/09/12/vente-de-billet-en-ligne-tunisair-se-met-a-la-page.html
 Kartago : http://kartago.blogspot.com/2005/09/photographies-anciennes-de-tunisie.html
 sary karatra paositra an'i Tonizia: http://michel.megnin.free.fr/lehnert.htm
 tsy fahavitany tsy mihinana Ftira toniziana fahiny matsiro: http://k-pax.hautetfort.com/archive/2005/09/18/irresistible-ftira.html
 lisitr'ireo toerana masina Miozolomana ao amin'ny Wikipedia izay feno vaovao diso: http://www.phpmagazine.net/1_ill_blog_your_mind_reloaded_/archive/945_wikipedia__correction_for_holy_places_in_islam.html
 manontany tena raha fanavakavaham-bolokoditra ireo fanehoan-kevitra sasantsasany ampiasain'ny tanora Toniziana any amin'ny fivarotana kafe: http://zaydoun1.blogspot.com/2005/09/racisme-en-tunisie.html
 niezaka nandoko sary Arabo sasany amin'ny fampiasana lokorano: http://moufattichkaaboura.blogspot.com/2005/09/ptite-fiert.html
 ny valin'ny fifaninanana Top Model Tunisie 2005: http://lablogeuse.blogspot.com/2005/09/top-model-tunisie-2005.html